နှင်းများအရည်များလာခြင်းနှင့်ရာသီဥတုပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်းတို့ကြောင့်သင်၏အိမ်ကိုဆောင်းတွင်းမှနွေ ဦး ရာသီသို့ကူးပြောင်းရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ သင်၏အိမ်သည်ရေခဲနှင့်ဆီးနှင်းများကိုဘယ်လောက်အထိကောင်းစွာဖြတ်သန်းသည်ကိုကြည့်ပြီးပြန်လည်ပြုပြင်ရန်လိုမလိုဆုံးဖြတ်ရန်အချိန်လည်းဖြစ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက် (၆) ခုနှင့်သင်နှင့်သင်၏အိမ်သည်လှပသောနွေရာသီအတွက်လုံးဝအဆင်သင့်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင့်အိမ်ကိုစိုစွတ်သောနွေရာသီအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်ဆောင်း ဦး ရာသီမှရေခဲနှင့်ဆီးနှင်းများလုပ်ဆောင်မှုကို ဦး စွာတွေ့မြင်ရမည်။ အခြေခံစစ်ဆေးမှုတွင်မည်သည့်ပျက်စီးမှုအတွက်မဆိုအပေါက်များနှင့်ခေါင်မိုးကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ ပြတင်းပေါက်များနှင့်တံခါးများကိုစနစ်တကျတံဆိပ်ခတ်ထားခြင်းသေချာစေရန်နှင့်ပိုက်အားလုံးသည်အအေးမှတစ်ဆင့်အအေးမခံဘဲစစ်ဆေးခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ဤဆောင်းပါး၏အဆုံးတွင်ဆောင်းရာသီနှင့်နွေ ဦး ရာသီစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းကိုသင့်အိမ်စာမေးပွဲအတွက်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဆောင်းတွင်းမစတင်ခင်သင်၏ရေကျင်းသန့်ရှင်းရေးကိုသန့်ရှင်းစွာထားပါကယခုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်မသင့်တော်ပါ။ သို့သော်၎င်းတို့ကိုစစ်ဆေးရန်မှာကောင်းပါသည်။ ကျန်ရှိနေသေးသောရေခဲများရှိပါက၎င်းကိုလည်ပတ်စေရန်ရေခဲအရည်ပျော်သည့်တက်ဘလက်များ (သို့) အေးခဲစေသည့်ဆားအချို့ထည့်သွင်း။ ၎င်းတို့ပုံမှန်လည်ပတ်နေစေရန်သေချာစေနိုင်သည်။ အရွက်များနှင့်အခြားအပျက်အစီးများကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောရေ၏အောက်ခြေ၌သန့်ရှင်းစွာစီးဆင်းနိုင်စေရန်ဆောင်းတွင်း၌စုဆောင်းထားသည့်မည်သည့်အမှိုက်များကိုမဆိုသန့်စင်ပါ။
ဆောင်းရာသီတစ်လျှောက်အပြင်ဘက်လေဝင်လေထွက်မှန်သမျှကိုဆီးနှင်း၊ ရေခဲသို့မဟုတ်ကောင်းသောခြံတွင်းအပျက်အစီးများကြောင့်ပိတ်ထားခဲ့သည်။ ဤနယ်မြေများကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းသည်နွေ ဦး လေစီးဆင်းမှုကိုခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုခြောက်သွေ့စေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ များသောအားဖြင့်အငွေ့ပျံခြင်းကိုများသောအားဖြင့်အိမ်၏အောက်ခြေနှင့်မြေအောက်နေရာများတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ကျိုးပဲ့နေသောဖန်သားပြင်များကိုပြုပြင်ပါသို့မဟုတ်အစားထိုးပါ။ ၎င်းကိုပိတ်ဆို့နိုင်သောအညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားပါ။ စစ်ဆေးရန်နောက်ထပ်အရေးကြီးသည့်အရာတစ်ခုမှာပိတ်ဆို့လျှင်အမှန်တကယ်မီးစတင်နိုင်သည်။ ဤလေဝင်လေထွက်သည်လေမှုတ်စက်ဖြစ်ပြီးခြောက်လလျှင်တစ်ကြိမ်သန့်ရှင်းရမည်။
နှင်းများအားလုံးအရည်ပျော်သွားသည်နှင့်အိမ်၏ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လမ်းလျှောက်ပါ၊ အက်ကြောင်းသို့မဟုတ်ရေကန်ရှိသည့်နေရာများရှိအုတ်မြစ်ကိုစစ်ဆေးပါ။ ရေကူးကန်များရှိပါကမိုးမရွာမီသန့်ရှင်းရေးလုပ်ထားပါ။ ရေရှိသည့်ပြanyနာများမဖြစ်ပေါ်စေရန်သေချာစေရန်အိမ်အတွင်းရှိသက်ဆိုင်ရာကြမ်းပြင်များနှင့်နံရံများကိုစစ်ဆေးပါ။
4. ခေါင်မိုး Tend, Mend နှင့် Defend
ဆောင်းရာသီမုန်တိုင်းများသည်နောက်ဆုံးပေါ်အိမ်ခေါင်မိုးများကိုပင်ပျက်စီးစေသည်ဟုသိထားကြသောကြောင့်စိုစွတ်သောရာသီဥတုမရောက်မီအပြည့်အဝစစ်ဆေးခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။ ပျောက်ဆုံးနေသောရေယုံအတွက်ရှာဖွေပါ၊ နှာများသို့မဟုတ်အခြေအနေများပျက်စီးခြင်းရှိမရှိကိုစစ်ဆေးပါ။ ပြုပြင်မှုပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ရေမှုတ်တစ်ချောင်းကို အသုံးပြု၍ မည်သည့်ရေညှိကိုမဆိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်ပါ။ ထို့နောက်၎င်းကိုအရည်သို့မဟုတ်အမှုန့်ရေညှိလူသတ်သမားဖြင့်ဖုံးအုပ်ခြင်းဖြင့်ရေညှိအသစ်ကိုကာကွယ်ရန်ပြင်ဆင်ပါ။
သင်၏ပြင်ပရေပိုက်ကိုပြန်ချိတ်ဆက်ရန်အချိန်တဖန်ရောက်ပြီဖြစ်သော်လည်းပထမ ဦး စွာဆောင်းတွင်းတစ်လျှောက်အပိုင်းအစတစ်ခုအတွင်းပိုက်များရှင်သန်နေစေရန်သေချာစွာပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်မည်သည့်အဖုံးများနှင့်အပူဒြပ်စင်များမဆိုဖယ်ရှားပြီးနောက်, သင်သည်မည်သည့်ချိုးဖောက်မှုများရှိဘို့ပိုက်ကိုအမြင်အာရုံစစ်ဆေးပါ။ သင်ဘာမှမမြင်ပါကပတ် ၀ န်းကျင်ရှိရေသို့မဟုတ်ရေပျက်စီးမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ အားလုံးကြည့်ကောင်းနေရင် faucets ကိုဖွင့်ပြီးမိနစ်အနည်းငယ်လောက်ပြေးခိုင်းပါ။ သင်ပိတ်ပြီးတစ်ပြိုင်နက် spigot ပတ်ပတ်လည်ရှိCheckရိယာကိုစစ်ဆေးပြီး၎င်းတွင်မဖြစ်သင့်သည့်ရေမရှိစေရန်စစ်ဆေးပါ။ ဒါ့အပြင်အတွင်းဘက်မှာဘာမှမထောက်ပံ့နိုင်အောင်သေချာအောင်အိမ်၏အတွင်းဘက်ရှိနံရံနှင့်ကြမ်းပြင်၏အခြားဘက်ခြမ်းတွင်စစ်ဆေးပါ။
6. Yard ပြန်လည်ထူထောင်ရေး
သင်၏ခြံကိုမိုးအုံ့နေသောကောင်းကင်မိုးအောက်၌ဝှက်ထားသော်လည်းယခုနွေ ဦး ရာသီတွင်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်အတွက်သိမ်းဆည်းထားသောမြက်ခင်းပြင်ပရိဘောဂများကိုထုတ်ယူပါ၊ ကင်ကင်ကိုအဆင်သင့်ပြင်ပါ။ နောက်ဆုံးတွင်ဓာတ်မြေသြဇာကိုထုတ်ယူပါ။ သင်၏အပင်များ၊ ချုံဖုတ်များနှင့်သစ်ပင်များသည်သူတို့၏နွေ ဦး ပေါက်နှုန်းနှင့်ဓာတ်မြေသြဇာများအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်အတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်ပင်ဖြစ်သည်။
သင့်အိမ်ကိုဆောင်းတွင်းမှနွေ ဦး ရာသီသို့ပြောင်းလဲရန်အသင့်ရှိခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူသည်၊ အထူးသဖြင့်သင်ပထမဆုံးလမ်းလျှောက်နေလျှင်။ areaရိယာတစ်ခုစီကိုသင်စစ်ဆေးသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့၏စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းကို အသုံးပြု၍ ပျက်စီးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ကူးပါ။ ၎င်းတို့သည်အာမခံတောင်းဆိုမှုများအတွက်သို့မဟုတ်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သောပစ္စည်းကိုသတ်မှတ်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ ဥပမာရေငုပ်သင်္ဘောအမျိုးအစား၊ အရောင်သို့မဟုတ်အစားထိုးရန်လိုအပ်သည့်ပိုက်တစ်မျိုး။
ရေကျွံ: အရေကျဉ်းများနှင့် spouts မှာအပျက်အစီးများကိုစစ်ဆေးပါ။ မည်သည့်ကွေးလ်တာကိုအစားထိုးသို့မဟုတ်ပြုပြင်ပါ။
ခေါင်မိုး – ချောင်နေသောသို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးနေသောရေယုံအတွက်စစ်ဆေးပါ။ ရေညှိကိုဖယ်ရှားပြီးရေညှိသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။
ဖောင်ဒေးရှင်း – အိမ်အပြင်ဘက်နှင့်တွင်းရှိအက်ကြောင်းများသို့မဟုတ်ရေကန်များကိုရှာဖွေပါ။
၀ င်းဒိုးနှင့်တံခါးများ – မည်သည့်မျက်ရည်များသို့မဟုတ်အပေါက်ပေါက်များကိုစစ်ဆေးသည်၊ အက်ကြောင်းများသို့မဟုတ်အခွံများကိုတိတိကျကျသတ်မှတ်ပြီးစစ်ဆေးခြင်း။ ဒါ့အပြင်အတွင်းပြူတင်းပေါက်ပေါ်ရှိစိုစွတ်မှုများကိုရှာဖွေပါ။
မုတ်၊ ကုန်းပတ် (သို့) ဟင်းလင်းပြင် – ပုပ်နေသောကြမ်းခင်းများ၊ ပြုပြင်ရန်လိုအပ်နေသောအက်ကွဲနေသောဘိလပ်မြေများကိုဖော်ထုတ်ပါ။ လိုအပ်ပါကအစားထိုးသို့မဟုတ်တံဆိပ်ခတ်။
မြေအောက်ခန်း – မြေအောက်ခန်းနံရံများနှင့်ကြမ်းပြင်များကိုအစိုဓာတ်ထိန်းခလုတ်ဖြင့်တံဆိပ်ခတ်ပြီးအက်ကြောင်းနှင့်ရေပျက်စီးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့သန့်ရှင်းတဲ့ကြမ်းပြင်ယိုစီးမှု။
အတွင်းပိုင်းနံရံများ – ရေပျက်စီးမှုအတွက်မျက်နှာကြက်များနှင့်၎င်းတို့နံရံများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောနံရံများကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးပါ။
အရည်ကျိုမီးဖိုသို့မဟုတ် HVAC – စစ်ထုတ်သည့်အရာများကိုအစားထိုးသို့မဟုတ်သန့်ရှင်းပါ။ အပျက်အစီးများကိုပြင်ပမှဖယ်ရှားပါ။
အပင်များ – အပင်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနွေ ဦး ရာသီအတွက်မြေသြဇာပြုပါ။
Spigots နှင့်ပိုက်: ယိုစိမ့်မှုသို့မဟုတ်လပ်ချိန်များအတွက်ပိုက်များကိုစစ်ဆေးပါ။ ပိုက်များပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ပြင်ပရှိနေရာများတွင်ရေပျက်စီးမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။